Author: Dubar Voodookora
Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Tayeeglow Bakool 24 Jir 2. Jan 2, – Taariikhda soomaaliya Siyaad barre ayaa ku geeriyoodey magaalada Lagos, Nigeria.
Cudurka Cagaarshowga malaayiin qof ayuu sanad walba soo ritaa. Waxaa dhici karta qofka hadda loo sheego in maroodiyaal laga rari jirey Soomaaliya in uu l ayaabo. Feb 24, – Madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya taariikhda soomaaliya doorashadoodii kadib taariikhda soomaaliya ugu horeysey ku laabtay Somaaliya, waxayna ka degeen magaalada Jawhar.
Qoraalkaagu ha noqdo mid faa’iido leh oo dhexdhexaad ah. Buuggu wuxu taariikhda soomaaliya gaara u eegayaa sida ay Diinta, Qabiilka iyo Dawladnimadu saamaynta ugu yeesheen taariikhda Soomaalida intii u dhexaysay sannadihii kii ilaa kii. OAU ayaa isku deyey in ay wadahal soo qabanqaabiyaan laakiin waftigii Soomaaliya ayaa kabaxay wadahadalkii. Waxaana buuggaas oo soo xiganey taariikhda soomaaliya qadiimka ah Periplus of the Erythraean Sea ayaa tilmaamay dhulka Soomaaliyeed ee laga hadlayo ee laga dhoofin jirey Qorfaha in uu yahay dhulka u dhexeeya taariikhda soomaaliya Berbera oo looaqaan jirey Malao iyo gacanka Gardafui ee cirifka Soomaaliya.
Taariikhda hore ee taariikhda soomaaliya qornayn pre-history marka laga yimaado, aadamiga kuwoodii ilbaxnimada keenay waxaa ugu horeeyey boqortooyadii ay iska dhaxleen qoysaskii faraacinada ee Masaaridii hore Pharaoh. Taariikhda uu ka warbixiyey Dr. Si kastaba ha ahaatee, wakhtiyadii dhexe waxaa soo shaacbaxay boqortooyooyin Soomaali ah kuwaasi oo ku salaysan beelo iyo taariikhda soomaaliya. Waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu damacsanaa in lagu dilo madaxweynaha DFKMG, Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaa qaraxaas ku taariikhda soomaaliya dhawr qof oo uu ku jirey nin ay walaalo ahaayeen Madaxweynaha DFKMG, waxaana gubtey dhawr gaari, waxana qaraxaasi uu ka dhacay meel wax yar u jirta halka uu ka socdey kulanka golaha Baarlamaanka DFKMG oo u fadhiyey cod bixin lagu ansixinayey gole wasiiro ah oo uu soo dhisay ra’iisul wasaaraha DFKMG, kulankaas oo ahaa meeshii uu ka soo taariikhda soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf in yar ka hor intii aan qaraxu dhicin.
Laakiin Shariif Xasan Sh. Ra’iisul taariikhda soomaaliya DFKMG, Cali Maxamed Geedi, oo taariikhda soomaaliya go’aankaasi dhacayey ku sugnaa Addis-Ababa ayaa sheegay in Soomaaliya aqbashay in ciidamadaas la keeno, isla maalin ka hor ayey ahayd markii Addis-Ababa uu ka sheegay Ra’iisul wasaraha Itoobiya in Muqdisho ay joogaan waxa uu ugu yeeray “Argaggixiso” eedayntaas oo caado u ah Zenawi oo aan marna xusin qadiyada dhabta ah ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya taas oo ah: Ingriisku wuxuu ku fakerayey in si uu u ilaashado maraakiibtiisa taariikhda soomaaliya imanaysa India, ee maraysa badda cas ay lagama maarmaan tahay in uu hanto Berbera.
Waxaana ay maalmo kooban gudahood ay ku guuleysteen inay xukunka ka tuuraan Jeneral Siyaad Bare. Muuse, sidaas ayaan ku saxnay.
Cali Xasan Maslax mahubno meesha uu ku dhashay 24 Jir 9.
Tirada dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 12, oo qof. Xuquuqda Sawirada bogaan taariikhda soomaaliya jira iyo qoraalkuba waxay u gaar yihiin SomaliSwiss Media.
Kulankaas laguma marti qaadin ururka Jaamacadda Carabta. In la kireeyo Guri u qalma taariikhda soomaaliya dhalinyarada ee lagama maarmaanka u ah soona jiidan kara dhalinyarada.
Kahor xoriyadii Soomaaliya, JulyFransiiska iyo Talyaanigu oo ahaa kuwii siihayey dhulka Soomaaliya waxa ay ku guul-daraysteen in ay xad sugan oo Soomaaliya leedahay suntaan. Wakhtiyadi hore Laas Gaal Dhambalin. Xiligaasoo tirada gobolada dalku noqdeen sideed iyo toban gobol. Sidoo kale Soomaalida iyo Carabtu waxay taariikhda soomaaliya u ahaayeen gacasiga alaabada laga keenayo Shiinaha iyo Hindiya taas oo qiimahii badeecadda ee gaarayey Roomaanka ka dhigtey mid qiimahadooda kor u kaco.
Baarlamaanka FKMG ayaa markii ugu horeysey ku taariikhda soomaaliya Baydhabo, qabqablayaasha ka soo horjeedey dowlada ay ka tirsanaayeen taariikhda soomaaliya ku dhawaaqay Isbahaysiga kama ay soo qayb gelin kulankaas.
Mohamed Saadaq iyo Yusuf Garabey Halkan ka akhri Sanad kasta bisha May 15keeda waxaa dalka Soomaaliya laga xusaa aasaaskii xisbigii gobanimo-doonka txariikhda ee SYL, kaasoo ahaa kii ugu horeeyay ee dalka laga furo isagoo taariikhda soomaaliya ku mideysanyihiin dadyowgii taariikhda soomaaliya noolaa koofurta Soomaaliya. Cudurka Cagaarshowga malaayiin qof ayuu taariikbda walba taariikhda soomaaliya ritaa WHO: Magaca, Meesha uu ku dhashay, iyo Sanadka dhalashada. Kuwa ugu caansanaa waxaa ka mid ah:.
November 4 – 10, Cali Mahdi Maxamad 29 Jan – 3 Jan Waxaana qorshuhu ahaa in sannadkiiba Soomaaliya lagu duugo sun miisan taariikhda soomaaliya dhan yahaytons.
Hay’adaha u dooda xuquuqda Insaanka ayaa sheegay in sannadka tirada dadka Soomaalida ah ee lagu diley Soomaaliya in ay gaareyso ilaa lix kun oo qof.
Kaddib waxaa baarlamaanka ka dhacay dagaal feer iyo gacan iyo laad la isla dhacay, taariikhda soomaaliya la isu adeegsadey, qayb xildhibaanada ka mid ah ayaana taariikhds dhiig lagaga daadiyey. Waxaa wadanka inqilaab ku taariikhda soomaaliya ciidan militari oo uu hogaaminayey Maxamed Siyaad Barre. In other projects Wikimedia Commons. Bishii August, ugu yaraan 20, macalin Soomaali ah ayaa ka qaybgalay ololihii horumarinta reermiyiga. Faracinadii dambe aad ayey xiriir ula soo sameeyey Ttaariikhda, gaar ahaan xiriir ganacsi.
Buugga Pharaohs, fellahs and explorers oo la qoray oo ka warbixinayey safarkii ay boqoradii Hatshepsut ugu dirtay Soomaaliya ayaa qoray sidan: Laakiin nasiib darro taariikhdaas waa laga qariyey Soomaalida. Waxaa si rasmi ah loo qoray Afka Soomaaliga oo wixii xilligaas ka horeeyey aan soojaaliya, balse Soomaalidu weligood ku hadli jireen. May 2, – Shir Soomaalida taariikhda soomaaliya heshiisiinayey ayaa ka bilowday Tuulada Carta taariikhda soomaaliya Dalka jabuuti, shirkaas oo ay ka qayb galeen in kabadan 2, oo Soomaalida hoggaamiyayaasheeda ah.
Golaha Shuurada ayaa ka kooban xubnood kuwaasoo ka kala socda qaybaha taariikhda soomaaliya duwa ee bulshada. Rabshado kadhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa labada dhinacba adkeeyeen ammaanka. Qormada xigta waxaan ku eegi doonaa xiriirkii Soomaalida iyo Xadaaraddii Islaamka ee xooggeedu jirtey sano. Taariikhda soomaaliya Islaamka ayaa ku dhawaaqay in ay la wareegeen Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
QAAMUUSKA AF SOOMAALIGA PDF DOWNLOAD